CENI:HANOMBOKA NY FANAVAOZANA NY LISI-PIFIDIANANA -
AccueilRaharaham-pirenenaCENI:HANOMBOKA NY FANAVAOZANA NY LISI-PIFIDIANANA
01/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hapetraka ny ara-dalàna. Raha ny nambaran’ny filohan’ny komity mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI), Hery Rakotomanana, andro lehibe ho an’ny fifidianana anio. Araka izany, hanomboka anio, 1 Desambra ihany koa, ny fotoana vaovao hanavaozana sy hanatsarana ny lisi-pifidianana.
Araka izany, manao antso avo amin’ireo mpiara-belona feno taona ny eo anivon’ny CENI amin’ny tokony hanatonan’izy ireo eny amin’ny fokontany izay misy azy amin’ny toeram-ponenany. Noho izany, miantso ireo feno 18 taona ny CENI mba hisoratra anarana eny amin’ny fokontany misy azy ary ho an’ireo 18 taona noho mihoatra kosa, mba tokony handalo eny amin’ny fokontany ihany koa izy ireo mba hanamarina na efa voasoratra na tsia amin’ny boki-pifidianana ny anaran’izy ireo. Miverina manoratra anarana kosa raha toa ka tsy tazana sy tsy ao anaty boki-pifidianana ny anaran’ireo feno 18 taona noho mihoatra.
Ankoatra izay, voalaza fa mba hisorohana amin’ny hosoka isan-karazany amin’ny lisi-pifidianana ity fanavaozana sy fanatsarana ny lisi-pifidianana ataon’ny CENI ity. Nambaran’ny filohan’ny CENI hatrany fa dingana iray lehibe amin’ny fanamafisana ny demokrasia sy mba hipetrahan’ny fitoniana maharitra ity fanavaozana ny lisi-pifidianana manerana ny Nosy ity.
Etsy andaniny, mikasika izay hatrany, manao antso avo amin’ireo sefo fokontany manerana an’i Madagasikara ny eo anivon’ny CENI mba handray ny andraikitra tandrify azy ary tsy hanao ambanin-javatra ny adidy sy andraikitra hiantsorohany manoloana ny fiatrehana sahady ireo fifidianana isan-tsokajiny.
« Manohana anao daholo ny artista », hoy i Fara John’s raha nila doka sy dera tamin’i Andry Rajoelina. Tena hita mihitsy hoe olona tsy mahalala na inona na inona ity Fara John’s ity, tsy ...Tohiny